Aya ndiwo maitiro atinogona kutsigira vakaremara | Karman® Mawiricheya
Tinogona sei kutsigira vakaremara vanhu? Ndizvo zvakakosha kuva ne vakaremara kutsigira kuwedzera uye kufambira mberi sezvatiri? Haisi chakavanzika chekuti vanhu vazhinji vari munyika havanzwe vakasununguka pane vanhu vakaremara. Kunyangwe hazvo 1 muvanhu vashanu vaine imwe mhando ye kuremara. Zvinonyanya kutora nguva kuti ugadzikane nepfungwa yekuve remara. Zvinotora zvakarereba kuti vanhu vagadzikane nevanhu vakaremara.
Kuva munhu ane kuremara, kudyidzana nevanhu kunogona kuburitsa tsika dzinovhiringidza dzakasiyana siyana. Asi hazvina kunonoka kuti chero munhu achinje nzira dzake.
Kana usati wambosangana nemunhu ane kuremara uye uri kunetseka0. Heano mamwe eanofanirwa-kuziva matipi ayo anogona kubatsira kutsigira peopl akaremarae uye ita kuti zvive nyore kwauri.
Remekedza Nzvimbo Yavo Yemunhu
Vanhu vakaremara, semumwewo munhu, vanodawo nzvimbo yavo. Vanogona kusazvifarira kana vamwe vakavabata kufamba zvinobatsira vasina kukumbira mvumo yavo. Kana iwe uchida kufambisa yavo wiricheya kunze kwenzira, ndokumbira mvumo yavo. Rangarira kugogodza pamusuwo usati waita nzira yako mukati mekamuri. Zvizhinji zvakakosha, havatombotauri nezve avo kuremara nevamwe. Mushure mezvose, ndizvo zvakakosha kubatsira vakaremara vanhu.
Usazorore, Kufambisa, kana Kugara pane Mumwe Munhu hwiricheya
Kungofanana nemadondoro anoonekwa sechikamu chemuviri wemunhu, a wiricheya zvakare chikamu chemuviri wemushandisi. Izvo hazvifanirwe kuve nebasa kuti unodiwa navo. Iwe unofanirwa kugara uchiremekedza yavo yega nzvimbo. Usagare pane yemunhu wiricheya isina kukumbira mvumo yavo. Kunyangwe kana munhu wacho akakukumbira kuti utarise yavo wiricheya pavanenge vachiita chimwe chinhu, hazvisati zvakanaka kuti vagare mune yavo wiricheya. Iwe haudi kupedzisa kutyora chikamu cheiyo midziyo kuti mumwe munhu anoenderana nekushandisa kwavo kwemazuva ese.
Ingori a hwiricheya - Dzikama
Izvi zvinotaura zvakanyanya mumazwi mashoma akajeka, asi zvakadzama zvinoreva izvi chinhu chekutora kumba newe kuitira kudyidzana kuri nani. Gara wakadzikama uye rangarira izvo vakaremara vanhu zvakare vanhu, kungoti vanogara pachigaro chine mavhiri. Ivo zvirokwazvo havana kusabatana sezvaungafunga.
Nenzira Dzese, Enda Pamwero Wavo
Kana iwe uchikwanisa kugwadama zvakanaka kana kugara pasi kuti uve padanho reziso nemunhu mune wiricheya, zvino, nenzira dzose, zviite. Vanhu vakaremara vanoshuvirawo kurapwa sevakaenzana munharaunda. Zvakanaka zvakakwana kugadzira pekugara kuti uve nechokwadi chekuti vanonzwa kugadzikana.
Ita iyo Ramp uye Walkways Zvinowanikwa
Inogona kutsamwisa iyo vanoshandisa wiricheya kutora imwe nzira, inozivikanwa se Zvinowanikwa nokuti mavhiripu. Iwe haudi ivo vangorambidzwa kupinda kwechivako nekuda kwekuvharwa. Rangarira nguva dzose kuva nehanya usati wamisa mota yako kana kuisa zvinhu panzira kana Ramp. Haufunge here kuti izvi zvinobatsira kutsigira vakaremara vanhu?
Mufananidzo naMarcus Aurelius pa Pexels.com
Sevha iyo Inodzikisira Kurapa
Kudzivirira kutaura kwekuzvidza senge
Ingo rangarira kuti vanhu vakaremara havana kumbosiyana uye havadi matauriro aunoita saka ngavaende.
Uyai Nekuzvivimba Kwavo
Panogona kunge paine zvimwe remara vanhu vanogona kutambura nekushaikwa kwekuzvivimba uye kudzikama. Rangarira, vazhinji vavo havadi tsitsi, uye havadi kutariswa. Naizvozvo, gara uchiedza kutarisa maziso paunenge uchitaura navo. Zvakare edza kusatanga hurukuro iyo inotenderedza yavo kuremara. Kana iwe uri kudyidzana nemunhu mune wiricheya, ipapo unofanira kugara pasi wotaura navo takatarisana. Usamire uye utaure pasi navo.
Bvuma maonero avo uye kuvapo kwavo
Zvinogona kuva zvakaoma kucherechedza. Asi, kana iwe uri kuresitorendi uye wobva waona munhu ane kuremara, ingo cherekedza mashandiro anoita mudonzvo navo. Kazhinji kazhinji kwete, ivo vanomirira vanobvunza chero wavanaye kwete kwavari kwavari nezveodha yavo. Zvinosuruvarisa kufungidzira kuti munhu wacho 'urema inogona kunge yakabata yavo kugona kwepfungwa naizvo.
ERGO KUKUNDA 19.8 lbs
Maitiro aya achiri kuratidza pfungwa dzevanhu vakati wandei, uye ndiyo imwe yemhosva dzinowanzoitika kuvanhu vakaremara. Naizvozvo, gara uchifungidzira kuti vanogona kugadzirisa zvinhu nekukurumidza sezvaungagone, uye uchave wakanaka kuenda.
Kubatana pamwe nekutsigira vanhu vari vakaremara zvakangooma uye kupatsanurwa sezvaunozviita iwe. Zvakakosha kurangarira hwaro hwataurwa pamusoro uye usatombokanganwa kukosha kwavanotakura kuratidza rutsigiro rwako kune vanhu vakaremara. Kana iwe uchikwanisa kuzvibata izvozvo, saka iwe zviri pamutemo wakatemwa pamusoro pevamwe, uchizvisarudzira kubva munzira dzekare dzekushamwaridzana nerutsigiro vakaremara vanhu.
Muchikamu chekutaura pazasi, tiudzei kuti ndedzipi dzimwe nzira dzinogona kuverengerwa kuratidza rutsigiro kune vanhu vakasiyana-siyana vakaremara.
Wiricheya mitambo uye ndeye nhoroondo yechimurenga